I-beta yoluntu ye-iOS 16 inokulibaziseka ngenxa yeengxaki zozinzo | Iindaba ze-iPhone
Ingelosi Gonzalez | 18/05/2022 12:00 | iOS 16, Izaziso
La WWDC isondele kwikona kwaye iya kuba kwinqaku eliphambili lokuvula xa uTim Cook kunye neqela lakhe beza kubonisa iinkqubo ezintsha zokusebenza. Phakathi kwazo kukho i-iOS 16 kunye ne-iPadOS 16, ekubonakala ukuba ayiyi kuza neenguqu ezinkulu zoyilo, kodwa kunye neempawu ezintsha eziphucula ukusebenzisana kwenkqubo kunye nomsebenzisi. Nangona kunjalo, kukho into eyenzekayo eCupertino. Ulwazi lwamva nje lukhomba Imiba yokuzinza kwi-iOS 16 betas. Oku kuya kubangela ukulibaziseka ekukhutshweni kwee-beta zoluntu Oko kunokuba semva kweeveki ezimbalwa.
Iingxaki zozinzo zingalibazisa ukuqaliswa kwe-beta yokuqala yoluntu ye-iOS 16
Igiya ye-beta yeenkqubo zokusebenza ze-Apple zingaphezulu kwegrisi. Kangangeminyaka, Apple ikhupha i-beta yokuqala kubaphuhlisi ekupheleni kwenqaku eliphambili lokuvula iWWDC. Ngelo xesha, ngabasebenzisi kuphela ababhalise kwiNkqubo yoPhuhliso lwe-Apple abanokufaka ezo beta kwizixhobo zabo. Kwiiveki kamva, ngokuqaliswa kwe-beta yesibini yabaphuhlisi, i-Apple ivula iNkqubo yeBeta yoLuntu, isungula inguqulelo yayo yokuqala. Le nkqubo inokufikelelwa nguye nawuphi na umsebenzisi onesixhobo esihambelanayo.
Nangona kunjalo, nge iOS 16 kubonakala ngathi imihla iya kutshintsha. Ulwazi lwamva nje oluvela gurman yalatha kwintoni I-iOS 16 ayizinzanga njengoko i-Apple ingathanda. Ulwakhiwo lwamva nje lwe-beta yokuqala kubaphuhlisi aluzinzanga ngokupheleleyo kwaye oko kuya kuthetha ukuba iibeta zoluntu ziya kulibazisa ukukhutshwa kwayo. Oku kungenxa yokuba i-Apple ayifuni ukubeka umngcipheko wokuphehlelela iinguqulelo ezinkulu ngendlela ye-betas yoluntu kuba oko kuya kuthetha ukusasaza inkqubo yokusebenza ekumgangatho ophantsi kunoko ufunwayo.
Ibeta kawonke wonke ye-iOS 16 icwangciswe ecaleni kwe-iOS 16 yomphuhlisi we-beta yesi-3 ngoJulayi. I-beta kawonke wonke ye-iOS idla ngokukhutshwa ecaleni kwe-beta 2. Oko kuthetha ukuba i-beta yoluntu inokuba ibaleka ngasemva. Iimbewu zangoku zangaphakathi zincinci. Izinto zisemanzi kwaye zinokutshintsha.
-UMark Gurman (@markgurman) Ngamana 16, 2022
Imihla ebonisayo ibeka i-beta yokuqala yabaphuhlisi ngoJuni 6, okwesibini kwiiveki ezimbini emva koko kunye neyesithathu ngoJulayi. Kukule beta yesithathu kubaphuhlisi xa iApple ithatha isigqibo sokusungula inguqulelo yayo yokuqala yeNkqubo yeBeta yoLuntu. Umahluko kukuba ngamanye amaxesha i-Apple ivula inkqubo yayo ye-beta yoluntu kwi-beta yesibini kubaphuhlisi.
Siza kubona ukuba abo baseCupertino ekugqibeleni bayakwazi ukufumana inguqulelo ezinzileyo yokubuyisela ikhalenda eqhelekileyo okanye ukuba, ngokuchaseneyo, sineendaba malunga ne-iOS 16 betas.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iOS » iOS 16 » I-iOS 16 ye-beta yoluntu inokulibaziseka ngenxa yemicimbi yozinzo
I-USB-C: Utshintsho lwesiqhagamshelo lunokwanda kuzo zonke iimveliso
Ukuvuza okuNtsha kwe-Sonos Sub Mini, i-Subwoofer yeBhajethi elandelayo ye-Sonos